Denizli Teleferik Hattına Yoğun İlgi | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean20 DenizliXiisadda Khatarta ah ee Khadka Gaadiidka Baabuurta Denizli
22 / 10 / 2015 20 Denizli, Turkish Aegean, GUUD, TELPHER
Xiisaha aad u badan ee Khadka Gawaarida Denizli Cable: Duqa Magaalada Denizli Magaalo Weyn Cusmaan Zolan ayaa ka dhigay gaariga cusub ee fiilada korontada laga furay hal bil lacag la'aan. Muwaadiniinta u ordaya xarunta waxay abuureen boqolaal mitir oo dabada ah si ay u helaan khibrad u leh gaadhiga fiilada
Dawlada Hoose ee Denizli waxay la kulantay farxad weyn markii Dawlada Hoose ee Denizli ay dhamaystirtay mashruuca gaadhiga fiilada ee 1.5 ay biloowday sannado kahor. Duqa magaalada Cusmaan Zolan, oo dhawaan sameeyay soo bandhigida gaariga fiilada, kaas oo qarashkiisu yahay 38 milyan oo Pound, ayaa ku dhawaaqay in xarunta ay siddo rakaab bilaash ah muddo bil ah. Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli, bayaanka, adeegga gawaadhida xarkaha 1 ee dadweynaha ayaa lacag la'aan ah inta lagu jiro bisha, kuwa maqlay dhawaqa ku soo dhacaya gaariga fiilada. Dadka Denizli ee raba inay raacaan gaadhiga fiilada ee adeeg ka helay xaafada Bagbasi ayaa qaatay neefka gaadhiga fiilada. Waxa loogu yeero isku-wareejinta dariiqa ayaa ka sarreysay mitirka 300. Muwaadiniinta raacaya nidaamka gawaarida fiilada waxay muujiyeen xiise weyn, ka dib waxay booqdeen aagga xarunta bulshada iyagoo aadaya meelaha bannaan ee saytuunka. Nidaamka gawaarida fiilada, kaas oo gaaraya dherer gaaraya kun mitir 400 mitir, wuxuu leeyahay qolyo xNUMX ah. Nidaamka xadhkaha gooye ee 24, oo dhererkiisu yahay kun kun oo 496 mitir, wuxuu gaarayaa heerkiisa ugu sarreeya marka laga bilaabo bilowga daqiiqadaha. baabuur cable taariikhi Turkey ee Izmir Balçova gaariga ugu horeysay cable, galay adeega ka dib markii sugaya sano dayactir 6, ayay la bilaabay sanadihii 8 mashruuca degmada Denizli. Jidku wuxuu qaadi doonaa rodol 1,5 qofkiiba hal bil kadib gaadiid bilaash ah. Sare u qaadista 5 by baabuurka korontada, 1400 bungalow house, Xerada teendhooyinka 30 ayaa ogaan doona, shirkii 20 xabbadood oo alaabooyinka maxalliga ah ayaa lagu iibiyaa buffet, waxaa jira laba makhaayado ah.
KOOXDA MUXUU YAHAY INUU FURO
Duqa magaalada Zolan wuxuu sharaxay in gaadhiga fiilada leh uu noqon doono adeega kuwa kulushahay kuleylka xagaaga iyo kuwa doonaya inay ku noolaadaan jiilaalka iyo barafka si buuxda. Baddeenu waxay noqon doontaa xarunta soo jiidashada dalxiisayaasha gudaha iyo dibedda. Waxaan dadkeenna isugu keenay xoolahan iyo baabuurkeena fiilada leh. Waxaan sii wadi doonnaa inaan sii daynno dabka inta ku harta Denizli ”.
Tünektepe Telefoonada Turki ee Antalya
Dulsaar aad u ballaaran oo kuyaala Bereket Tareen ee magaalada Sivas
Xidhiidhka kabaha ee xirbaydh-Zeytinli
Baabuurta farsamada badda
Khadka Baabuurta ee Denizli
Weerar lagu qaado Gaariga Cable ee Denizli
Iskuulka Xirfadlaha ee Deeganka ayaa qabanqaabiyey Seminar ku saabsan Gaadiidka Tareenka
Maanta in History: line tareenka October 23 1978 Turkey-Suuriya-Ciraaq furay